वाणिज्य बैंकहरुमा खराब कर्जा कसको धेरै कसको थोरै ? - Lagani News
Home Analysis Share वाणिज्य बैंकहरुमा खराब कर्जा कसको धेरै कसको थोरै ?
वाणिज्य बैंकहरुमा खराब कर्जा कसको धेरै कसको थोरै ?
Published: Sunday, November 18, 2018 2018-11-18T23:17:00-08:00
Sunil Baral November 18, 2018 Analysis, Share,
लगानीयुज/काठमान्डौ: आर्थिक वर्ष ७५/७६ को प्रथम त्रैमासको वित्तिय विवरण सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशन गरिसकेको अवस्था छ। बैंकहरुले निस्क्रिय कर्जामा सुधार ल्याउदै आएको अवस्था छ। *२७ वाणिज्य बैंक मध्य कसैको पनि निस्क्रिय कर्जा प्रतिशत ४ भन्दा माथि नहुनुले पनि बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा जोखिम न्यूनीकरण अपनाएको देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंक मध्ये सबै भन्दा धेरै खराब कर्जा कृषि विकास बैंकको छ। कृषि विकास बैंकको ३ दशमलव ९३ प्रतिशत कर्जा खराब छ भने सबै भन्दा थोरै खराब कर्जा सानिमा बैंकको छ। सानिमा बैंकको ० दशमलव ०८ प्रतिशत कर्जा खराब छ।
९ वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा एक प्रतिशत भन्दा कम छ भने १ प्रतिशत देखि दुई प्रतिशत खराब कर्जा हुने वाणिज्य बैंकको संख्या १३ वटा छ भने बाँकी ५ वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा २ प्रतिशत देखि ४ प्रतिशत को बिचमा छ।
श्रोत : कम्पनीको आर्थिक वर्ष ७५/७६ को प्रथम त्रैमासको वित्तिय विवरण
*नोट : रास्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई समावेश गरिएको छैन।
By Sunil Baral - November 18, 2018